Shiinaha Ku -iibinta Kuleylka leh sze loo habeeyay oo leh qiime wanaagsan Warshadda Guddiga Isku -laabashada Sanduuqa iyo alaab -qeybiyeyaasha | WARQAD HUBIN
Iibinta Kulul sze oo la habeeyay oo leh qiime wanaagsan Guddiga Sanduuqa Isku laabidda
Cabbirka joogtada ah
5) Adeeg loo habeeyay cabbir kala duwan macaamiisha
1) Qallafsanaan xoog leh iyo iska caabin isku laabma oo aad u fiican.
2) Awood daabacaad oo wanaagsan.
3) La -qabsiga habraacyada ka dib oo lagu dabaqi karo shuruudaha gaarka ah ee xirmada alaabada kala duwan.
4) Xakamaynta tayada adag.
5) Adeeg loo habeeyay shuruudaha kala duwan ee macaamiisha.
Waxaa si weyn loogu adeegsaday Baakadaha, Daabacaadda iyo Dahaarka:
1) Alaabta baakadaha ee sanduuqyada yaryar, sida cuntada, khamriga, toy, daroogada, sanduuqyada kabaha iyo kuwa kale.
2) Si baaxad leh loo adeegsado oo lagu bixiyo aagga daabacaadda, daabacaad midab midab leh, ka dibna samee kartoonno loo adeegsado baakad ahaan, ama loo isticmaalo naqshadda, alaabada gacanta.
3) Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sumadda badeecadda, saxan iyo qasabadda baakadaha khariidadda leh.
1: xirxirida duudduuban
Lagu duudduubay 3 lakab stong PE dahaarka warqad liner.
2: Xirmooyinka xaashiyaha waaweyn
Filimka BOPP waa la duubay, waxaa lagu duubay sariir adag oo alwaax ah, 4 xaglood waxaa lagu ilaalinayaa sabuuradda kartoonka.
3: Xidhmada loo habeeyay macaamiisha.
4: TDS oo ku saabsan "NINGBO FOLD"
Waxaan ku siin karnaa muunad bilaash ah pls ila soo xiriir oo ila wadaag cinwaankaaga cad /lambarka boostada /qofka xiriirka /lambarka taleefanka.
Fiiro gaar ah: Cabbirka muunaddu had iyo jeer waa sida warqadda A4, haddii aad leedahay shuruudo gaar ah, noo sheeg.
Hore: Guddiga C1S Folding Box Board/ GC1 board fool -maroodiga/ Bulk High in Roll and Sheet
Xiga: OEM dahaarka leh C1S warqad loo habeeyay sabuuradda warqadda
Guddiga warqadda APP
C1s Guddiga maroodiga Fbb
Fbb C1s Guddiga maroodiga
Guddiga Maroodiga 230 Gsm
Warqadda Guddiga Maroodiga 250gsm
Isku laab Ningbo